အိုင်ဗ်ရီကို့စ်မှာ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ဆန်တွေတင်ပို့ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ ၃ ခုမှာ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် အတွင်းရေးမှူးပါတဲ့ ကုမ္ပဏီပါဝင်
အိုင်ဗ်ရီကို့စ်မှာ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ဆန်တွေတင်ပို့ခဲ့တ...
19 เม.ย. 2562 - 16:18 น.
ဧရာဟင်္သာရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းထဲက ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အကြီးအကျယ် လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီဥက္ကဌအဖြစ် ဦးဇော်ဝင်းရှိန်က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာပါ။
အိုင်ဗ်ရီကို့စ်မှာ ဆန်တွေဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆန်တန်ချိန် ၂ သောင်း ၂ ထောင်ကျော် သယ်ဆောင်လာတဲ့ သင်္ဘောဟာ မြန်မာဆိပ်ကမ်းကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက ထွက်ရှိခဲ့ပြီး တကယ်တမ်း မှာယူထားတဲ့ အာဖရိကက ဂီနီနိုင်ငံအရောက်မှာ ဆန်အိတ်တွေဟာ အလေးချိန်မပြည့်လို့ တန်ချိန် ၄ ထောင်ကိုပဲ ဝယ်ယူပြီး ၁ သောင်း ၈ ထောင်ကို ပယ်ဆန်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာလို့ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက ပြောထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အိုင်ဗ်ရီကို့စ်မှာ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ဆန်တွေတင်ပို့ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ ၃ ခုမှာ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် အတွင်းရေးမှူးပါတဲ့ ကုမ္ပဏီပါဝင်